Oaxaca ၏ပုံမှန် ၀ တ်စုံ ခရီးသွားသတင်းများ
Oaxaca မှပုံမှန် ၀ တ်စုံ
Mariela Carril | 26/08/2021 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/08/2021 23:21 | ယဉျကြေးမှု, မက္ကစီကို
အ ရိုးရာဝတ်စုံ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အစဉ်အလာများ၊ တိုင်းပြည်နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ ၎င်း၏စားဝတ်နေရေး၊ ဂီတ ငါတို့တွေလူမျိုးတွေရဲ့ကျောပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအလေးချိန်ရှိတယ်၊ တိုးတက်နိုင်တယ်၊ တီထွင်မှုတွေထပ်တိုးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရာဝတ်စုံကအတိတ်၊ မူလအစ၊ သမိုင်းကိုငါတို့ကိုသတိရတယ်။ ငါတို့ကဘယ်သူလဲ၊ ငါတို့ဘယ်ကလာတာလဲ။
ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အ ၀ တ်တစ်ထည်တည်းသာရှိလေ့မရှိသော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လာရပြန်သည် Oaxaca ၏ပုံမှန်ဝတ်စုံ.
2 Oaxaca မှပုံမှန် ၀ တ်စုံ
မက္ကဆီကိုအနောက်တောင်ပိုင်းဒေသသည်ပြည်နယ်ဖြစ်သည် Oaxaca သည်တိုင်းရင်းသားလူ ဦး ရေများပြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လူမျိုးစု ၁၆ စုရှိတယ်၊ သူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအများကြီးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအံ့သြစရာပါ။
တောင်များ၊ မြစ်များ၊ လှိုဏ်ဂူများ၊ ဤအရာအားလုံးသည်၎င်း၏ပထဝီဝင်ကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောရာသီဥတုနှင့်aကြီးမားသောဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမရ။ ၎င်း၏ကြီးမားသောဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်စပိန်ကိုလိုနီပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည် ဘာသာရေး syncretism ၏မြေ.
Oaxaca သည်သန့်ရှင်းသူအားလုံးကိုကျင်းပသည်၊ သို့သော်အားလုံးသောအကောင်းဆုံးပွဲတော်သည်ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် Virgen de la Soledad ၏ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာအလွန်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသောအခြားအပျိုစင်များလည်းရှိသည်။
Oaxaca တွင်လူကြိုက်အများဆုံးပုံမှန်ဝတ်စုံများအနက်တစ်ခုမှာ Tehuana ဖြစ်သည်အနုပညာရှင်သည်ဤမျှလောက်လူသိများသောစတိုင်လ် Frida khaloမရ။ ၎င်းသည် Tehuanpetec ၏ isthmus တွင်နေထိုင်သော Zapotec လူမျိုးစု၏အမျိုးသမီးဝတ်စုံဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်နှင့်ဖြတ်သန်းမှုများအဆက်မပြတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိနေသော်လည်းယနေ့အခမ်းအနားများစွာတွင်တွေ့မြင်ရသည်။
နေ့စဉ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုရှိတယ်: ချည်ထည်နှင့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုလုပ်ထားသော rabona၊ စကတ်ရှည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုရှိတယ် အနည်းငယ်ပိုကြော့ရှင်းသောဗားရှင်း အခြားအ ၀ တ်တစ်ထည်၏အဖြူရောင် olin ကိုထည့်လိုက်သည်။ တစ်ခုကဘယ်လိုလဲ ဂါဝန်တစ်ဝက် ဆံပင်ပုံစံသည်အရေးကြီးလာသည်။ အမျိုးသမီးသည်အိမ်ထောင်ရှိလျှင်သူမညာဘက်ရှိပန်းလမ်းညွှန်ဇာကို သုံး၍ သူသည်လူပျိုဖြစ်သော်လည်းလက်ဝဲဘက်၌ခင်ပွန်းကိုရှာသည်။
La ဂါလာဗားရှင်း သင့်တော်ပြီးသားနားကပ်၊ petticoat နှင့်ဂန္ထဝင်ရှိသည် လှိုင် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံအချို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ဆံပင်ကိုလေးနှင့်ကျစ်ဆံမြီးများနှင့်ခေါင်းပေါ်တွင်အကြွေစေ့ဖြင့်ကျစ်ထားသည်။ huipil သည်ကြီးမားပြီးပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ သေးငယ်သည့်ခြမ်းကိုအခမ်းအနားများအတွက်သုံးသည်။ ပိုကြီးသောဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ရန်သို့မဟုတ်ကခုန်ရန်သုံးသည်။ နောက်ထပ်လူသိများသည့် ပို၍ သန့်စင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုရှိသေးသည် ကြီးကြပ်မှုနာယက ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သောပိုးစွယ်တစ်ခုပေါ်လာပြီး Porfirio Díazခေတ်တွင်ပေါ်လာသည်။
နောက်ပိုင်းမှာပြည်နယ်ရဲ့အလယ်ပိုင်းချိုင့်ဝှမ်းတောင်ပိုင်းကိုခေါ်တာ chenteñaဝတ်စုံမရ။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ကိုလိုနီရောစပ်မှု၊ ဒီမှာငါတို့မှာအနက်ရောင်စုလျားနဲ့ပိုဆိုးတဲ့ချည်သားအင်္ကျီလက်တိုနဲ့တောက်ပတဲ့အရောင်လက်ချည်စကတ်ရှိတယ်။
Oaxaca ချိုင့်ဝှမ်းရှိ Coyopetec မြို့တွင် coyotepec ဝတ်စုံအ ၀ တ်ထည်သည် plaid ဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်လုံး၏ဘုံပိုင်းခြေ huipil ကိုလည်ပင်းတွင်ချည်နှင့်ချည်ဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စုလျားသည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းကိုပတ်တီးကဲ့သို့ပတ်ထားသည်။
၎င်း၏အပိုင်းအတွက် Sierra Mazateca ၌ huipil သည်အလွန်တောက်ပသောအရောင်များဖြင့် cross stitch နှင့်အတူရှေ့ပန်းတစ်ခုရှိသည်။ ပန်းထိုးသည်များသောအားဖြင့်ဒေသခံပန်းများနှင့်ငှက်များဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်နှင့်စိမ်းပြာရောင်အပြာရောင်ဖဲကြိုးများလည်းရှိသည်။ huipil ၏အောက်ခြေတွင်အနီရောင်ပန်းထိုးဖြင့်အလှဆင်ထားသော petticoat ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ဆံပင်ကိုကျစ်ဆံမြီးနှစ်ချောင်းဖြင့်ကပြကြပြီးကခုန်ကြသောအခါသူတို့ပစ်လိုက်သောပန်းပွင့်ပွင့်အပြည့်ပါသောဘူးသီးတစ်လုံးကိုသူတို့လက်ထဲထည့်သည်။
နောက်ထပ်လှပသောရိုးရာဝတ်စုံတစ်ခုမှာ ၀ တ်စုံဖြစ်သည် Jamiltepec မှ malacatera ဝတ်စုံမရ။ ၎င်းကိုဝါဂွမ်းလှည့်ရန် winches သုံးသူမည်သူမဆိုကြောင့်၎င်းကိုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အနီရောင် lilac နှင့်အနီရောင်ဆိုးထားပြီးမိန်းကလေးများဝတ်သည် chongos winch ဆေးထိုးအပ်များထည့်ထားသော ဦး ခေါင်း၌
ထဲမှာ Tehuanteepec ၏ isthmus ကမ်းခြေ Huave လူမျိုးစုသည်နေထိုင်သည်။ ဒီမှာအရမ်းပူတယ်ဒါကြောင့် ဂန္ထဝင် huipil သည်ပေါ့ပါးသည်စကတ်သည်ရှည်လျားပြီးပန်းများနှင့်ရိုက်နှိပ်ထားပြီးအနီရောင်အရှုပ်အထွေးရှိသည်။ ပင်လယ်နဲ့ဝေး၊ mixteca sierra ၌ triqui ဝတ်စုံရှိသည်မရ။ ဤတွင် huipil သည်ရှည်လျားပြီးအနီရောင်ရှိပြီးပန်းထိုးများစွာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ဆံပင်များကိုဘီးစတစ်စတည်းထဲသို့ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီးအရောင်လည်ဆွဲများစွာကိုလည်ပင်းမှဆွဲထားသည်။
ယခုအချိန်ထိကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောပုံမှန် Oaxaca ဝတ်စုံအချို့ကိုနာမည်ပေးထားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။ Oaxaca မှအမျိုးသားတစ် ဦး အတွက်ပုံမှန် ၀ တ်စုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ကောင်းပြီ၊ တော်တော်များများလည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတာကအဲဒါအကြောင်းပဲမဟုတ်လား ပိုရိုးရှင်းပါတယ်မရ။ ၎င်းကိုအများအားဖြင့်ဘောင်းဘီတို၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ ခြေညှပ်ဖိနပ်၊ တစ်ခါတစ်ရံသိုးမွှေး (သို့) ထန်းထုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အမှန်တရားမှာဝတ်စုံများစွာရှိသော်လည်းယေဘူယျအားဖြင့်ပိုင်းခြေကိုထိန်းသိမ်းထားသည် လှိုင်မရ။ ပိုတိုသည်၊ ပိုရှည်သည်၊ ပိုချယ်လှယ်သည်၊ ၎င်းသည်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်အသုဘအခမ်းအနားကဲ့သို့ပိုမိုလေးနက်သောပွဲများအတွက်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အကတွေရှိတဲ့ပွဲတွေမှာပိုအရောင်ရင့်လာတယ်။
ဒီဝတ်စုံတွေထဲကတစ်ခုခုဟာအရောင်နဲ့အပျော်ကစားဖို့ပြယုဂ်တစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ သူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ စင်မြင့်ပေါ်တွင်အက၊ အကများနှင့်အခမ်းအနားများတွင်သူတို့ကိုမြင်ရသည်မှာမျက်လုံးများအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မက္ကစီကိုသို့ခရီးသွားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သိသာသည်၊ huipil ၀ ယ်ခြင်းသည်သင်၏စွန့်စားမှုများအတွက်အမှတ်တရကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိမျက်လုံးအားလုံးကိုခိုးယူသွားမည့်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုနှင့်အဝတ်အစားတစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » Oaxaca မှပုံမှန် ၀ တ်စုံ